Prague Chimes, Prague Orloj - Prague
Adiresy: Staroměstské nám. 1, 110 00 Staré Město, Repoblika Tseky
Fotoana fiasana: isan'andro, manomboka amin'ny 09:00 hatramin'ny 22:00
Ny fahatsapana ny mozika, ny rafitra majestic ary ireo zavatra hafa mahaliana sy mahafinaritra dia mampanantena ireo mpizaha tany fa hitsidika ny kianja Old Town . Fa ny tena zava-dehibe sy ny mari-pamantarana , malaza ho an'i Prague manontolo, fa koa ao amin'ny Repoblika Tseky manontolo, dia ny karazana Prague, ny famantaranandro tranainy amin'ny astronomia.
Famotehana ara-tantara fohy
Ny famantaranandro astronomie Prague, izy ireo dia Orloj famantaranandro ao Prague, dia efa zokiny indrindra amin'ny rafitra famantaranandro tsara fanahy. Ny fanamarihana voalohany azy dia voarakitra tamin'ny 1402, saingy noho ny fikarakarana tsy ara-dalàna ny hoavy, dia nilaina ny fanoloana. Ny rafitra efa tafavoaka hatramin'izao androany izao dia natao tamin'ny 1410 nataon'ny mpikarakara watch Mikulash avy amin'i Kadani tamin'ny tetikasa Jan Schindel, matematika sy astronoma, fantatra tamin'izany fotoana izany.
Ny endrikendrikendron'ny fikorontanan'ny toetrandro amin'ny kianja Old Town ao Prague, araka ny tantara, dia nalain'ny mpanao sary sokitra Peter Parlerzh. Hatramin'ny taonjato faha-18, dia nikarakara tamim-pahamalinana tokoa ilay famantaranandro, fa tonga kosa ilay vanim-potoana nahatongavan'ity rafitra ity. Sarotra ny maka sary an-tsaina, fa ny famantaranandro malaza indrindra tany Prague dia naniry ny hoesorina avy eny amin'ny tilikambo ary natsipy! Voasoroka izany loza izany, ary nandritra ny fanavaozana tamin'ny 1865, dia voavalina avokoa ny voka-dratsy rehetra tao Prague. Ny fahavoazana manan-danja sy ny Lapan'ny tanàna tamin'ny famantaranandro, ary ny Trano Old Town any Prague nandritry ny Ady Lehibe Faharoa, tamin'ny onjam-panenjehana manohitra ny Nazi. Na izany aza, tamin'ny taona 1948 dia naverina tamin'ny laoniny avokoa ny zava-drehetra, ary amin'izao fotoana izao ny mekanika ¾ dia misy tsipiriany voalohany momba io fotoana io.
Ny fitaovana ao Prague Orloj
Ny famantaranandro momba ny astronomika ao Prague dia mandrefy telo ora: ny old Czech, ny Eoropeana afovoany ary ny kintana. Amin'ny alalan'izy ireo dia afaka mianatra ihany koa ny toerana zodiacal an'ny Masoandro sy ny volana. Ankoatr'izay, ireo kisoa ao Prague dia mirakitra ny astronomia sy ny kalandary. Ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 8 hariva isaky ny ora dia misy fampisehoana kely ao amin'ny toe-tsaina medieval.
Manodidina ny famantaran'ny astronomia any Prague, misy marika maromaro. Ny toetoetrany tsy azo lavina dia amulets voalohany. Ambonin'izany, miresaka momba ny tarehimarika mahazatra ho an'ny renivohitr'i Tseky manodidina ny famantaranandro astronoma izahay. Ohatra, eo amin'ny andaniny roa amin'ilay tabilao misy sarivongana roa basilisks, ary misy rojo volamena eo ambany kape. Afaka mahita ny sarivongan'ilay anjely sy ireo apostoly 12 koa ianao, mba hiarovana ny famantaranandro amin'ny asam-panahin'i Prague amin'ny hery ratsy. Ireo sy ireo tsipiriany hafa momba ny famolavolana dia mahatonga ny sarin'ny Praiminisitra Praiminisitra tena mahafinaritra.
Ahoana no ahatongavana any amin'ireo trano fidiovana any Prague?
Raha manontany tena ianao hoe aiza no famantaranandro malaza indrindra any Prague, dia tsy haharitra ela ny valiny. Ny sehatr'izy ireo dia ao anatin'ny tilikambon'ny Trano Old Town, ao amin'ny faritra manan-tantara ao an-tanàna. Afaka miditra eto ianao amin'ny alàlan'ny bisy No. 194 sy amin'ny tramaky ny 2, 17, 18, 93. Ankoatra izany, misy metro eo amin'ny tsipika A eo akaiky.
Basilika an'ny Olomasina Petera sy Paoly
Vehivavy kiraro ambany ambany
Naomi Campbell dia nanakiana ny ekipan'ny mpanonta boky taloha Vogue Alexandra Shulman
Masketsa ho an'ny fandroana
Inona no asehon'ny hymen?
Hividy miaraka amin'ny voninkazo
Ahoana ny fomba hamoahana alika amin'ny taratasy?
33 fomba hanovana zavatra miaraka amin'ny loko manitra
Fandinihana ny nofy - Nahoana no nofinofy momba ny fahaterahana amin'ny nofy?
Ny nosy am-ponja
Sakafo - Fitsaboana SPA ao an-trano
Detralex - famantarana ny fampiasana
Georgina Rodriguez sy Cristiano Ronaldo tamin'ny sary tsara tarehy dia nanatrika ny lanonana fanolorana ny Quina Awards ao Lisbonne
Sakafo avy amin'ny kankana